ပတ္တရားမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘယ်ဘက်မှပတ္တရားမြင်ကွင်း၊ နူံးနွပ်ဥယျာဉ်၊ ပတ္တရားနေဝင်ချိန်၊ ပတ္တရားမြို့၏အလှမြင်ကွင်း၊ အမှန်တရားသန့်ရှင်းရာဌာန၊ လူလျှောက်လမ်း
Bay of Bangkok၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မြေပုံကို ပြသရန်
ကိုဩဒိနိတ်: 12°56′N 100°53′E﻿ / ﻿12.933°N 100.883°E﻿ / 12.933; 100.883
၅၃.၄ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၀.၆ စတုရန်းမိုင်)
၂,၂၃၈/km၂ (၅၈၀၀/sq mi)
ပတ္တရား (ထိုင်း: พัทยา, RTGS: Phatthaya, အသံထွက် [pʰát.tʰā.jāː] ( နားဆင်))သည်ထိုင်းနိုင်ငံ၏မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ထိုမြို့သည်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်း၊ ဘန်ကောက်အရှေ့တောင်ဘက်၁၀၀ ကီလိုမီတာ (၆၂ မိုင်) ချွန်ဘူရီးပြည်နယ်ရှိဘန်လမူးခရိုင်အတွင်းရှိသော်လည်းကောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမဟုတ်။ ပတ္တရားမြို့(ထိုင်း: เมืองพัทยา, RTGS: Mueang Phatthaya)သည်နောင်ကလေ့၊ နဲ့ကလေ့၊ ခွေ့ယိုင်း၊ နောင်ပလားလိုင်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများဖုံးလွှမ်းထားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစည်ပင်သာယာနယ်မြေဖြစ်သည်။ စါ့သည် စီရာဇာ၊ လမ်ချပန်နှင့်ချွန်ဘူရီနှင့်အတူအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေစက်မှုဇုန်တွင်တည်ရှိသည်။ ပတ္တရားသည်လူဦးရေ ၁၀၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသောပတ္ထနာ၊ ချွန်ဘူရီမြို့ပြဧရိယာ၏ဗဟိုဖြစ်သည်။
ပတ္တရားဟူသောအမည်ရင်မှာဖလပ်ရားတာ့ခ် နောက်ပိုင်းတွင်တာ့ခ်ဆင်ဘုရင်နှင့်သူ၏စစ်တပ်သည်အယုဒ္ဓယမှကျန်ထဘူရီအထိချီတက်ခဲ့သည်။ ၁၇၆၇ ခုနှစ်တွင်ဗမာကျူးကျော်သူများ၏မြို့တော်မပြိုကျမီဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သူ့စစ်တပ်သည်ယခုပတ္တယား၏အနီးတစ်ဝိုက်သို့ရောက်သောအခါ၊ ဖလပ်ရားတာ့ခ်သည်နိုင်ကလုံးအမည်ရှိဒေသခံခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံသည့်အခါဖလပ်ရားတာ့ခ်၏ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့်စစ်တပ်၏တင်းကျပ်သောစည်းကမ်းချက်ကြောင့်နိုင်ကလုံးကိုစွဲမှတ်သွားစေခဲ့သည်။ သူဟာတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ချခဲ့ပြီးသူ၏တပ်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်စစ်တပ်အချင်းချင်းထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့သည့်နေရာကို“ ထဲ့လ်ဖလပ်ရား” ဟုလူသိများခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ“ ဖလပ်ရား ၏စစ်တပ်” ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်နောက်ပိုင်းတွင်မိုးရာသီအစတွင်အနောက်တောင်ဘက်မှအရှေ့မြောက်သို့လေတိုက်သောလေပြေအမည်ဖြင့်ပတ္တရားဖြစ်သည်။
ပတ္တရားသည် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များအထိငါးဖမ်းတံငါးရွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကာလအတွင်းအမေရိကန်စစ်သား R&Rများသည်အနားယူခြင်းနှင့်အပန်းဖြေခြင်းသို့စတင်ရောက်ရှိချိန်တွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက်တွင်ခိုလပ်ရှိအခြေစိုက်စခန်းမှရောက်ရှိလာပြီးကမ်းခြေတောင်ဘက်အခြမ်းရှိဖလပ်ရားဇူ့ထောမှအိမ်များကိုငှားရမ်းခဲ့သည့်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုသည်ယခုအခါထက့်ဟုလူသိများသောပတ္တရားအားထောက်ခံချက်ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ 
ပတ္တယားတွင်အပူပိုင်းစိုစွတ်သောနှင့်ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုရှိပြီးအောက်ပါရာသီများအဖြစ်ပိုင်းခြားထားသည်အပူနှင့်ခြောက်သွေ့သော ဒီဇင်ဘာလမှဖေဖော်ဝါရီလ၊ အပူနှင့်စိုထိုင်းမတ်လနှင့်ဧပြီလနှင့်အပူနှင့်မိုးရာသီမေမှနိုဝင်ဘာ။
Pattaya (1981–2010) အတွက် ရာသီဥတု အချက်အလက်များ
Error: စိမ်းလန်းသော is notavalid rain color alternative, use |rain colour=green or remove the rain colour parameter for the standard blue coloring.
၁.၆ ၂.၅ ၄.၅ ၆.၄ ၁၁.၈ ၁၂.၀ ၁၂.၄ ၁၃.၁ ၁၆.၆ ၁၇.၃ ၆.၀ ၁.၄ ၁၀၅.၆
၇၃ ၇၇ ၇၇ ၇၇ ၇၈ ၇၇ ၇၇ ၇၇ 81 83 76 70 77
229.4 211.9 238.7 204.0 155.0 114.0 117.8 114.7 108.0 145.7 189.0 226.3 ၂၀၅၄.၅
Source #1: ထိုင်းမိုးလေ၀သဌာန
Source #2: ရေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဇလဗေဒတော်ဝင်ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန (နေရောင်နှင့်စိုထိုင်းဆရုံး)
မြို့တော်တွင်လူဦးရေ ၃၂၀၂၆၂ ဦးရှိပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုကိုတွက်ချက်ခဲ့သည်။. ထိုလူဦးရေအများစုမှာထိုင်းလူမျိုးများဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကိုအသိအမှတ်မပြုသော်လည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာရှုပ်ထွေးသော်လည်းလူမျိုးစုမရှိသောထိုင်းလူမျိုးများဖြစ်သော်လည်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများမှာပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ပုံမှန်နိုင်ငံခြားဖိအားပေးမှုများကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သန်းခေါင်စာရင်းလူဦးရေသည်စုစုပေါင်းကိန်းဂဏန်းကိုကိုယ်စားမပြုပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံသားများနှင့်တရားဝင်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများအနည်းငယ်သည်မြို့တော်ကို၎င်းတို့၏မွေးရပ်မြေအဖြစ်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါပြည်နယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဝင်သည် ၂၀၁၀ တွင်လူ ဦးရေ ၁၀၇,၉၄၄ ဦး ရှိပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၁၁၉,၅၃၀ သို့ ၁၁၉၅၃၀ သို့တိုးလာသည်။ ဘန်ကောက်မြို့ပြဒေသကဲ့သို့ပင်အမျိုးသားစာရင်းအင်းရုံးထက်အခြားအေဂျင်စီတစ်ခုမှထုတ်ပေးသောမှတ်ပုံတင်ထားသောလူဦးရေပမာဏသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောမြို့ပြအသွင်ပြောင်းမှုအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ စီးပွားရေးသည်ကျပန်းထိုင်းအလုပ်သမားများအပေါ်များစွာမူတည်နေသည်။ မြို့တော်တွင်မူ၎င်းတို့၏မွေးရပ်ဇာတိ၌မှတ်ပုံတင်ထားဆဲဖြစ်သည်။ မြို့တော်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်မြို့တော်၌အငြိမ်းစားယူသူများသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းခံရသည့်ရေရှည်နိုင်ငံခြားသားများစွာသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်မရေတွက်ပါ။ စုစုပေါင်းလူဦးရေအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ကိန်းဂဏန်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော်လူဦးရေသန်းတစ်ဝက်ခန့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကြီးမားသောလူဦး ရေသည်ထိုင်းအလုပ်သမားများနေရာယူထားသောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပတ္တရားမြို့သည်နောင်ကလေ့ ၂၀၁၀ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုတွင် ၇၃,၉၀၁ဦးနှင့်ခွေ့ယိုင်းကဲ့သို့သောအနီးအနားရှိဒေသများကိုဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ပတ္တရားသည်ဟိုတယ် ၂၀၀၀ နှင့်အခန်းပေါင်း ၁၃၆၀၀၀ဟိုတယ်အခန်းစရင်းကို ၂၀၁၅ တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏အဆင်းရဲဆုံးဒေသဖြစ်သည့်ပင်လူသိများသောပင်ဟုလူသိများမှလူအများစုတို့သည်ပတ္ထရာသို့လာရောက်လည်ပတ်ကြပြီးသူတို့၏မွေးရပ်မြေရှိသန်းခေါင်စာရင်းရည်မှန်းချက်များအတွက်ရေတွက်ခြင်းခံရသည်။ ဤအရှေ့မြောက်အလုပ်သမားအများစုသည်Go-Goဘားစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ရာထူးများဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ သူတို့ရရှိနိုင်သည့်လစာမှာသူတို့၏ဇာသာရှိအီးစမ်းတွင်များစွာရှိသည်။ ကြီးထွားလာနေသောနိုင်ငံခြားသားအငြိမ်းစားများသည်ပတ္တယားတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အငြိမ်းစားယူလိုသောအသက် ၅၀ ကျော်သောနိုင်ငံခြားသားများအတွက်အထူးဗီဇာအမျိုးအစားရှိသည်။ ပတ္တရားသည်အခြားနိုင်ငံများမှအငြိမ်းစားယူသူများအတွက်၎င်း၏ရာသီဥတုနှင့်လူနေမှုပုံစံစသဖြင့်သာမကနိုင်ငံများစွာထက်လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသောကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ရှိပတ္တရားသည်ချွန်ဘူရီပြည်နယ်၊ ဘမ်လမူးခရိုင်ရှိဘန်ကောက်မြို့၏တောင်ဘက်တွင်၁၆၀ ကီလိုမီတာ (၉၉ မိုင်)အကွာတွင်ရှိသည်။ ပတ္တရားမြို့သည်အထူးစည်ပင်သာယာနယ်မြေဖြစ်ပြီးနောင်ကလေ့(Nongprue)နှင့်နဲ့ကလေ့ (Naklua) နှင့်ခွေ့ယိုင်း၊ နောင်ပလားလိုင်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ပတ္တရားမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ဖြစ်သောဘမ်လမူးမြို့နယ်သည်ဘမ်လမူး(Banglamung)၊ နောင်ပလားလိုင်းနှင့်တာ့ခ်ခင့်တစ့်တို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ဘမ်းစလဲ့ (Bang Saray)သည်ပတ္တရားတောင်ပိုင်းနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်။"မဟာပတ္တရား" သည် ဘမ်လမူး၊ ချွန်ဘူရီပြည်နယ်ရှိခရိုင် ၁၁ ခုတွင်တစ်ခုအပါအပါဝင်ကမ်းရိုးတန်းအများစုကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ၎င်းကိုမြောက်ပိုင်းအပိုင်းပိုကြီးအဖြစ်ပိုင်းခြားထားသည်။
ပင်လယ်အော်ဧရိယာ၏အဓိကကမ်းခြေနှစ်ခုကိုခွဲခြားထားသည်။ ပတ္တရားသဲသောင်ပြင်သည်မြို့လယ်ခေါင်နှင့်အပြိုင်တည်ရှိပြီး ၂.၇ ကီလိုမီတာအကွာရှိသောပတ္တရားကျော်မှတောင်ဘက်လူလျှောက်လမ်းသို့ဆက်သွယ်ထားသည်။ ၃၅ မီတာကျယ်သောကမ်းခြေသည်တိုက်စားခြင်းနှင့်အချို့နေရာများတွင် ၂ မှ ၃ မီတာအထိသာလျှော့ချနိုင်သည်။ ဘတ် ၄၂၉ သန်းအားကမ်းခြေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ကမ်းခြေအကျယ် ၅၀ အထိတိုးရန်ကော့ရမ်းကွီ့ကမ်းခြေမှသဲ ၃၆၀,၀၀၀ m3 ကိုသယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကဖတ္ထရားသည် င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ ၁၀ နှစ်ခန့်အကြာတွင်၎င်း၏ကမ်းခြေများပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ပတ္တရားကမ်းခြေပထမမီတာ ၄၀၀ ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးစီးပြီးတစ်လအကြာတွင်ရေကြီးမှုကြောင့်အလုပ်သည်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့သည်။ ကမ်းခြေသည်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတိုက်စားမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်တင်သွင်းသောသဲများကိုပထမဆုံးအသုံးပြုသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ တာဝန်ရှိသူတဦးကရေကြီးမှုပျက်စီးမှုကိုမပြုပြင်ဘဲထားတာကြာကြာလေ၊ ပိုဆိုးလေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဖလပ်တန်နက်သည်ပတ္တရား၏တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိပြီး၎င်း၏ရှုထောင့်များနှင့်တောင်ထိပ်ပေါ်ရှိဖလပ်ယိုင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဗိသုကာတို့တွင်ကျော်ကြားသည်။ ပတ္တရားပန်းခြံနှင့်ပတ္တရားမျှော်စင်တို့သည်ဖလပ်တန်နက်တောင်ဘက်စွန်းတွင်တည်ရှိပြီး ပတ္တရားပြပွဲနှင့်ကွန်ဗင်းရှင်းခန်းမ (P.E.A.C.H) သည်ဖလပ်တန်နက်မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဖလပ်တန်နက်သဘာ၀ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကမ်းခြေပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ကျော့်ထင့်နှင့်ပတ္တရားမြို့အကြားအဆင်ပြေသောနေရာများကြောင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
ကျော့်ထင့်ကိုပတ္တရားမှတောင်ပိုင်းလမ်းကြောင်းဖြစ်သောထယ့်ပလပ်စီ့လမ်းမှခွဲခြားထားသည်။ အထပ်မြင့်ကွန်ဒိုမီနီယံများ၊ ကမ်းခြေရှိဟိုတယ်များ၊ ဘန်ဂလိုအဆောက်အအုံများ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ အရက်ဘားများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များပါဝင်သည်။
အလယ်ပိုင်းပတ္တယားဘယ်ဘက်ရှိပတ္တမြား ၂ လမ်း
နောင်ကလေ့ ၇ ၆၇,၈၄၆
နဲ့ကလေ့ ၇ ၄၉,၁၂၉
နောင်ပလားလိုင်း ၃ ၂,၄၃
ခွေ့ယိုင်း ၁ ၁၅၄
ပတ္တရားဒေသသို့သွားရောက်လည်ပတ်သူများသည်အသေးအဖွဲရာဇဝတ်မှုများကိုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် Pomocketing နှင့်ယုံကြည်မှုလှည့်ကွက်များသာဖြစ်သည်။ ရာဇဝတ်မှုဒဏ်ခံရသည့်ဧည့်သည်များကိုကူညီရန်အထူးခရီးသွားရဲဌာနကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှရှစ်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သော Big Trouble Tourist Thailand ရုပ်မြင်သံကြားတွင်ပတ္တရားရှိကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ပတ်သက်သောရာဇဝတ်မှုများအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖိဆစ်ဝေ့ချာချီဝသည်ပတ္တယားနှင့်ချွန်ဘူရီဒေသများရှိအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူများကိုအစိုးရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူများအားတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်၊ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးအာရှခေါင်းဆောင်များအားကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးအချို့မှာရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဒေသခံနိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောသတင်းစာများနှင့်မဂ္ဂဇင်းများကိုအပတ်စဉ်သို့မဟုတ်လစဉ်ထုတ်ဝေသည်၊ အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်၊ ရုရှားနှင့်ဂျာမန်တို့တွင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောသတင်းစာများတွင်ပတ္တရားမေးလ်နှင့်ပတ္တရားပြည်သူများပါဝင်သည်။ ပတ္တရားသတင်းသည်ဒေသခံသတင်းများကိုဘာသာစကားခြောက်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောအွန်လိုင်းပေါ်တယ်ဖြစ်သည်။ DER FARANG သည်ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြင့် ၁၄ ရက်တစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေသည်။ Thailands Tidende သည်လစဉ်ထုတ်နော်ဝေဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောသတင်းစာဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်စာရေးဆရာ Michel Houellebecq ၏ပလက်ဖောင်းဝတ္ထုတွင်ပတ္တရားမြို့နှင့်ညအိပ်မက်များကိုအဓိကဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်း၊ ဂျပန်အသင်းစာသင်ကျောင်းစီရာချာသည်ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာသင်ကျောင်းဖြစ်သည့် စီရာချာတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဘန်ကောက်ရှိထိုင်းဂျပန်အစည်းအရုံးစာသင်ကျောင်းနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သည်။ စီရာချာတွင်ဂျပန်တနင်္ဂနွေစာသင်ကျောင်းဖြစ်သော စီရာချာပတ္တရားဂျပန်နောက်ဆက်တွဲစာသင်ကျောင်းရှိသည်။ စီရာချတွင်ဂျပန်တနင်္ဂနွေကျောင်းဖြစ်သောစီရာချာပတ္တရားဂျပန်နောက်ဆက်တွဲကျောင်းရှိသည်။
ချင်ချဲလ်, ကာဇက်စတန် (ဇွန်လ၂၀၁၇)
စိန့်ပီတာစဘတ်, ရုရှား (ဇွန်လ၂၀၁၇)
ချင်တောင်ရှီး, တရုတ် (၂၀၁၃)
ဟူဘေး, တရုတ်နိုင်ငံ (2014)
ကျန်ချင့်ချီလ်, တရုတ်နိုင်ငံ (2016)
↑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา။
↑ รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ.2562 (in Thai) (၂၀၁၉ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ၃၁ရက်)။ 14 June 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sattahip and the history of GIs coming to Pattaya။ 24 July 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 12 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Welcome to Pattaya (2018)။ 25 February 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ရာသီဥတုကာလအတွက်ဒေတာ၁၉၈၁–၂၀၁၀ ၁၉–၂၀။ ထိုင်းမိုးလေ၀သဌာန။ ဩဂုတ်လ၄ရက်၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงโดยวิธีของ Penman Monteith (Reference Crop Evapotranspiration by Penman Monteith) (in ထိုင်း)။ ရေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဇလဗေဒရုံး၊ တော်ဝင်ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန။ ဩဂုတ်လ၄ရက်၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ထိုင်းမြို့ပြဧရိယာများ လူဦးရေစာရင်းမြေပုံများ။
↑ "တရုတ်လူမျိုးများကပတ္တရား၏ဟိုတယ်များအပေါ်ဖိအားပေးခဲ့သည်"၊ ၂၀၁၅ဇူလိုင်လ၁၅ရက်။ ၂၀၁၈မတ်လ ၁၂ ရက် တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "ပြန်လည်တည်ထောင်ထားသောပတ္တရားကမ်းခြေသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုဆွဲဆောင်သည်"၊ ဘန်ကောက်ပို့စ်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဩဂုတ် ၅ရက်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဩဂုတ် ၅ရက် တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Pattaya City beach sand-fill project hit hard by flooding"၊ Bangkok Post၊7August 2018။7August 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Pattaya sea water quality gets 'poor' grade"၊ Bangkok Post၊ 21 June 2016။ 21 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Thailand's Costa del Crime" (Editorial)၊7November 2005။ 21 October 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 July 2013။
↑ Campbell၊ Duncan။ "Great Escape"၊ 11 April 2005။
↑ Karla Cripps (11 September 2009)။ Drugs, scams and beat downs. Just another night of 'Big Trouble in Tourist Thailand'။ CNN။
↑ "Thai protests force Asia summit cancellation"၊ 11 April 2009။
↑ "Thailand Cancels Summit After Protests"၊ The New York Times၊ 11 April 2009။ 26 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "学校案内 シラチャ校アクセス ." Thai Japanese Association School. Retrieved on9January 2018. Archived9January 2018 at the Wayback Machine.
↑ "アジアの補習授業校一覧" (). MEXT.2January 2003. Retrieved on 12 January 2018. "シラチヤ・パタヤ SRIRAOHA [sic]・PATTAYA JAPANESE SUPPLEMENT SCHOOL[လင့်ခ်သေ]
↑ Pattaya, Qingdao ink sister-city agreement။ pattayamail.com (31 January 2013)။ 29 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pattaya, Hubei sign sister-city agreement။ pattayamail.com (5 November 2014)။ 29 March 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zhangjiajie City and Thailand Chonburi City Pattaya City became sister cities (10 December 2016)။ 10 October 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 June 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wikivoyage ရှိ Pattaya သို့ ခရီးသွားလမ်းညွှန်များ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပတ္တရားမြို့&oldid=742542" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၄:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။